ကောင်းကင်ကို: နို့ ရည်ခန်းနေတဲ့ မိခင်
နို့ ရည်ခန်းနေတဲ့ မိခင်
အရာရာတိုင်း မှာ အကောင်းနဲ့ အဆိုး ဒွန်တွဲနေသတဲ့။
ငါနေခဲ့ရတဲ့ကျောင်းတွေမှာ အလင်းနဲ့ အမှောင် ဘယ်လောက်အချိုးရှိလဲ။
မြန်မာစာနဲ့ အတူ အလွတ်ကျက်ခဲ့ရတဲ့ စာစီစာကုံးတွေ
အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ အတူ အသံထွက်အမှားများနဲ့ ဝေါဟာရတွေ
သချာင်္နဲ့ အတူ မေးခွန်းခန့် မှန်းတွက်ချက်မှုတွေ
ဇီဝဗေဒနဲ့ အတူ သဘောပေါက်မှုမပါတဲ့ တပွဲတိုး ဘိုင်အိုသီချင်းတွေ
သမိုင်းနဲ့ အတူ ပေါ်လစီရောထည့်ထားတဲ့ မှိုင်းတွေ
ဂါရဝ တရားနဲ့ အတူ ရေငုံနှုတ်ပိတ် ပြန်မထောက်ပြရဲတဲ့စိတ်တွေ….
ပညာကို ဆာလောင် ငတ်မွတ်နေသူတွေအတွက်
မတက်လို့ လည်းမရ၊ တက်ပြီးတော့လည်း ဟန်မကျတဲ့
ပူပြင်းခြောက်သွေ့ လွန်းတဲ့ ကန္တာရထဲက
Posted by Kaung Kin Ko at 3:27 PM
"မြန်မာစာနဲ့ အတူ အလွတ်ကျက်ခဲ့ရတဲ့ စာစီစာကုံးတွေ
ဂါရဝ တရားနဲ့ အတူ ရေငုံနှုတ်ပိတ် ပြန်မထောက်ပြရဲတဲ့စိတ်တွေ…."
ဟုတ်တယ် ကိုကောင်းရေ။ အဲဒါတွေက "ကိုယ့်တွေ့၊ ကိုယ်တွေ့" လို့ပြောလို့ရတယ်။ ပြီးတော့ ဘာတဲ့ ဂုဏ်ထူးထွက်ရင် မြန်မာပြည်မှာက "D" ထွက်တာတဲ့။ အပြင်ရောက်တော့မှပဲ ကိုယ်ထွက်ခဲ့တဲ့ "D" တွေကြောင့်၊ အညံ့လို့ ယူဆခံရတယ်။ မြန်မာပြည်မှာက တော်ရင် "D"၊ သူများနိုင်ငံတွေမှာ ညံ့ရင် "D"။ ဇောက်ထိုးမြန်မာပြည် ဖြစ်နေပြီဗျ။
ထိထိမိမိ တွေးတတ်လွန်းတယ် ကိုကောင်းကင်ရယ်..
yeah absolutely right. I love this poem althogh I didn't like slave poem before. keep going brother...
အော် ကျောင်းတော်ကြီးတွေ ကျောင်းတော်ကြီးတွေ ... တစ္ဆေတွေ ပူးကပ်နေတဲ့ ၀တ်ကျောင်းအိုကြီးထဲမှာ ဆုတောင်းမှ ရမယ်ဆိုရင် .....
ကဗျာခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ အကြောင်းအရာလေးက လိုက်တယ်ဗျာ။ တကယ့်လက်ရှိအခြေအနေကို ထင်ဟပ်ပြနေတဲ့ ကဗျာလေးပဲ
အားနာရင် ခါးပါတတ်တယ် ဆိုလို့လားမသိ၊
(ကောင်းကင်ကို က၊ နို့ရည်ခန်းနေတဲ့ မိခင် မှာ)
ဖွဲ့ဆိုရေးထား၊ စာသားက ဒီလို
ထိတာက ကျွန်မတို့ ။
အောက်ဖေါ်ပြပါ စာတချို့ကြောင့် မဟုတ်လား။
“သမိုင်းနဲ့ အတူ ပေါ်လစီရောထည့်ထားတဲ့ မှိုင်းတွေ
ဂါရဝ တရားနဲ့ အတူ ရေငုံနှုတ်ပိတ် ပြန်မထောက်ပြရဲတဲ့စိတ်တွေ….” လို့ ရှင်..ပဲ၊ ပြောခဲ့တယ်လေ။
ခြေဆုံးခေါင်းဆုံးချော်နေတဲ့ စနစ်…” ( ရှင်ပြောသလို… အဲဒီလို မြစ်ကြီးထဲ)
အဆင့် တစ်၊ နှစ် မရခဲ့ သော်လည်း။
(တစ်နေ့ကျရင်…..ငါ….ဘာညာ.. ဘာညာ…ဖြစ်ရမယ်)ဆိုပြီး (မတတ်နိုင်ဘူးလေ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သိနေတာ )
တော်တယ်လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ထင်၊ ( အဲဒါကတော့ ကျွန်မ တစ်ယောက်ထဲလား မသိဘူး)
တစ်ချို့က ကျောင်းအပြင် ကျူရှင်မယူ။
မိဘက ကျောင်းကို လဒ်မထိုး။
အနည်းစုက မုံ့ဘိုးတောင် အနိုင်နိုင်။
မိမိတန်ဘိုးများ မပြနိုင်ခဲ့ ။
၀ါသနာပါရာမှာ ထွန်းပေါက် ၊ (ရှင်တစ်ယောက် အပါအ၀င်)
စင်ပေါ်ရောက်သူအများကြီး ဗီဇက ပါပြီးသားဆိုတာ၊
ကြွားပြီး ရေးပစ်လိုက်ချင်တယ်…နော်….။ ..နော်။
အဲဒီ ပိုးလောက်လန်း ပညာရေးစနစ်ကြီး ကို ထိမိအောင်ရေးပြနိူင်ပါပေ့...။
သောက်ရေအိုးထဲက လောက်တစ်ကောင်ဟာ ကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါရဲ့။
ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဓိပ္ပါယ် များစွာပါရှိတဲ့ ကဗျာကောင်းလေးတခုကို ဖတ်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အစ်မ ငယ်ငယ်က စာစီစာကုံးကို ဘယ်တုန်းကမှ မကျက်ခဲ့ဖူးဘူး စာစီစာကုံးကို မကျက်ပဲနဲ့ ကိုယ့်အရေးအသားနဲ့ ကိုယ်ဖြေတော့ ဘယ်တော့မှ အမှတ်မရဘူး ဒါကြောင့် တခြားဘာသာတွေမှာ အမှတ်ပြည့် ရဖူးပေမဲ့ မြန်မာစာမှာ တခါမှ ၇၀ ပြည့်အောင် မရဖူးဘူး။ သတ်ပုံမှားတာလည်းပါတယ်။ Biology ဆိုတာ မြန်မာပြည်မှာတုန်း အစ်မအတွက် တကယ်ကို စိတ်ပျက်စရာ Subject ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ ဒီမှာရောက်ပြီး အထက်တန်းအဆင့် ပြန်တက်တော့ ဘိုင်အိုမှာ ဆရာက သီအိုရီပဲ သင်ပြီး ကျန်တာကို မိမိဖါသာ ဓါတ်ခွဲခန်းမှာလည်း Eeperiment လုပ်ပြီး အပြင်မှာလည်း အချက်အလက်ရှာ Ijvestigation လုပ်ပြီး Analysis လုပ်ရတော့ တကယ်ကို စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတဲ့ ဘာသာ ဖြစ်နေတယ်။ နောက်ပိုင်း အလျဉ်းသင့်ရင် ပို့စ်တခုလောက်တော့ တင်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားဦးမယ်။ ကဗျာလေးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပြီး တော့ အနိုင်မခံ ကဗျာရဲ့ မူရင်း စပ်ဆိုသူအမည်မှန်နဲ့ မူရင်းအင်္ဂလိပ်လိုကိုပါ မှတ်ချက်မှာ လာရေးပေးသွားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော့်။
အင်း............ သောက်ပီးရင်လဲ ဒုက္ခရောက်မှာပဲ။
ခုတော့ ပရိုက်ဗိတ်ကျောင်းတွေ ပေါ်လာပါပီဗျာ။
(တိုးပွားချမ်းသာသူတွေအတွက်ပဲ ဖြစ်ရင်လဲ ဖြစ်နိုင်တယ်)
ကောင်းတဲ့ နိမိတ်ပုံလေးတွေပါတဲ့ ကဗျာပါ။ လင့်ခ်အသစ်ကို ပြန်လင့်ခ်ထားလိုက်ပြီဗျာ။
ခေါင်းစဉ်က နို့ရည်ခမ်းတဲ့မိခင်ဆိုတော့ နောက်ဆုံးတိုနိဂုံးချုပ်တဲ့ ဥပမာလေးကို မဖတ်ခင် ကဗျာဆရာ ဘယ်လိုများ တင်စားမလဲလို့ ရင်တမမနဲ့ ခြောက်သွေ့တဲ့ သဲကန္ဒာရက ညိုးနေတဲ့ပန်းလေးလား တစ်ခုခုကိုတော့ ဥပမာပေးတော့မယ်လို့ သိလိုက်တဲ့ အချိန်နဲ့ သူ့ဥပမာကိုဖတ်လိုက်ရတဲ့ အချိန်ကာလအတွင်း သုံးစက္ကန်လောက်မှာ ကျမအတွေးဖြစ်သွားတာ စိတ်လည်းလှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတယ် ဘယ်လိုများ ထွက်လာမလဲဆိုတဲ့စိတ်ကူးနေတာ ရေးချလိုက်တာက လောက်တွေမျိုးပွားတဲ့ သောက်ရေအိုးများ ဆိုပါလား ဟားးးးးးးးးးးးးးး တော်တော်စဉ်းစားတတ်တယ်နော်
စိုးရိမ် 'စိတ်' မှတ်
RIT (သို့ မဟုတ်) အရေးအကြီးဆုံးဇာနည်အာဂ တအုပ်ရဲ့ေ...
လက်ဆောင် (အိုဟင်နရီ ရဲ့ ဝတ္ထု) (ဘာသာပြန်...မောင်ထွန...